Ulo akwukwo mmuta asusu abuo | Houston's Asụsụ Bekee malitere kemgbe 1982
Pịa ebe a maka Enyemaka Pụrụ Iche
Klasị maka mgbede maka ịdị mma gị.
O teghị aka ịmụ asụsụ Spanish!
Na BEI, anyị na-arụ ọrụ na gị iji zụlite nkà gị ma meziwanye iwu gị banyere asụsụ Bekee ka ị wee nwekwuo ihe ịga nke ọma na ndụ. Welcomemụ akwụkwọ F-1 nabata!
Deba aha Taa!
Zuru ikike asụsụ Bekee gị ma mụta iji obi ike na-ekwurịta okwu nke ọma na nkasi obi. Ezigbo akụkọ Bekee na mmụta maka Bekee ịchọrọ.
Bụrụnụ ndị nwere ike ịzụ ahịa n’ebe ọrụ! Jiri obi erughi ala mee njem mgbe gị na ndị obodo nwere ike ikwurịta okwu! Ezubere nkuzi anyi iji nye gi asusu igbo i gha eme.
America n'ezie bu ala ohere, ma na BEI, anyi no n’iru itinye aka na ohere a.
Tinye maka ihe I-20
Interested nwere mmasị itinye akwụkwọ maka visa ụmụ akwụkwọ? Want chọrọ ịgbanwe ọnọdụ gị na United States iji mụọ oge niile? Wantchọrọ ịnyefe ihe ndekọ I-20 gị na BEI?
BEI enyerela ndi oru aka di iche iche kariri iri ato 38 aka iwulite ikike ndi oru ha n’uwa.
Have nwere asụsụ ị chọrọ? A na-ahazi Mmemme Pụrụ Iche maka naanị gị! Mụọ ihe na otu-otu, ya na enyi, ma ọ bụ obere ìgwè.
Ndị Gbara Ọsọ Ọha na Ọha
Na BEI, anyị bụ obodo zuru ụwa ọnụ, na-anọchite anya mba sitere n'akụkụ ụwa niile maka ahụmịhe mmụta pụrụ iche na-adịghị ka ndị ọzọ. N'ebe a, ị ga-erite uru site na mmemme mmụta dị elu yana usoro ọmụmụ zuru oke nke ga-akwadebe gị nke ọma maka ndụ ọhụrụ gị na States.
Site na mmekorita nke mahadum anyị, ị nwere ike ịchekwaa onwe gị oge na ego a ga-etinye maka ule TOEFL. Ccessga nke oma na mmemme asụsụ anyị ga - eme ka ị ghara iru ala mgbe ị na - eso otu n’ime ndị ọrụ mmekọrịta anyị ama ama. Mepee awa niile ahụ ị na-amụ maka ule TOEFL wee banye klas ozugbo!
BEI jeerela obodo ndị gbara ọsọ ndụ nke Houston ozi ọtụtụ afọ. Ọrụ Nkụzi anyị bụ ihe dị mkpa iji nye ma kwalite ndị bi ebe ọhụrụ nwere ikike asụsụ Bekee ka ịnyagharịa n'ụlọ ọhụrụ ha. Anyị na-akụziri ụmụ akwụkwọ anyị inwe obi ike na obi ike ebe ha na-eme ka izu ụka ha zuo oke.
N'ụwa nke taa jupụtara ọrụ, ị bụghị oge na ike ịbanye na klaasị. Ọ bụ ya mere ụlọ akwụkwọ ji abịakwute gị, yana usoro ọmụmụ n'ịntanetị ka akwadoro iji nye ndụmọdụ omenala site na nkasi obi nke ụlọ gị. Soro ndị nkuzi gị na ụmụ klas gị na-emekọrịta ihe mgbe ị na-amụtakwu ihe ọmụma gị ma na-agbasawanye ịkọtaghachi gị.
Gụọ All News
Onyinye Pụrụ Iche nke Mach
March 5, 2021 Onyinye Enyemaka
Prompo Ọhụrụ Pụrụ Iche
February 2, 2021 Onyinye Enyemaka
December 4, 2020 Onyinye Enyemaka News